1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Akụ-UP Project Lower Unit Service / Dochie Impeller Water mgbapụta | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Akụ-UP Project Lower Unit Service / Dochie Impeller Water mgbapụta
Ọ dị mma mgbe niile iji dochie anya ihe na-adịghị mma. Iji nweta ihe na-eme ka ọ ghara ịdị, ị ghaghị iwepụ isi ike ahụ, kwụpụ njikọ ntụgharị ahụ, ma wepụ akụkụ nke ala ahụ. Iwepụ isi isi ahụ dịka ihe ngbu n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ na-achọ ka nke a, mana ọ gaghị esiri ya ike ka ị ghara ịtụ egwu. Ihe na-asọ oyi bụ otu n'ime akụkụ kachasị njọ nke moto n'ihi na ọ daa, ịnwere ike ịkụnye moto ahụ ngwa ngwa, buru isi, ma ọ bụ nwee nsogbu ndị ọzọ dị mkpa. Ị nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na ụgbọala agbagoro ọkụ n'ihi na a na-agbacha agba na isi mmiri ma ọ bụ na-agwụ ike. Mgbe ị na-agba ọsọ, ị ga-ahụ mmiri dị mma nke na-agbapụ na njedebe nke ala. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ mmiri na-apụta site na mpaghara ala ahụ, mechie ụgbọ ala ma dochie elekere tupu ya ebido ya ọzọ. Ikwesịrị ịmetụrụ mkpịsị aka isi na crankcase na mkpịsị aka gị ma ghara ịchụ ọkụ. Mkpụrụ motọ ọhụrụ nwere "telltale" nke ga-ele gị anya ka ị hụ na ọ bụ "ehichapụ" mmiri site na onu na-agbada. Ndị a na-emeghị agadi enweghi "telltale," ya mere, ị ga-eleba anya na azụ nke ala dị ala iji hụ mmiri ahụ na-agwụcha.
Wepu ncha asa nke jidere isi ike. Ikwesịrị iwepụ njikọ nkedo nke na-aga n'agbata ogwe aka na-eme ihe na ọganihu oge. Ị nwere ike iji nwayọọ mee pịọmbụ nke isi ike iji mebie akara ahụ. Welite isi ike ma wepụ ya.
Kwụpụ trotul Linkage
Wepụ Power Head kposara
Ebuli Powerhead Breaking Akara
Na-ele anya ala n'okpuru ebe ike isi nọ, i nwere ike ịhụ nro nke nwere njikọ ngbanwe. E nwere mkpụrụ abụọ dị iche iche na-ekewapụ iche. Wepụ mkpụrụ ndị a ma kpochapụ njikọ ntụgharị. Ị nwere ike ịmegharị ya na-aga n'ihu iji mee ka njikọ ahụ kewapụ. Mgbe ị nọ ebe a, wepụ mmiri isi iyi mmiri na mmiri si n'elu nkuku ụgbọala. Kpachara anya n'ihi na akụkụ ndị a na-achọ ịpụ elu ma furu efu.
Wepụ Mgbanwe Linkage Mkpụrụ
Linkage Mkpụrụ wepu
Ụfọdụ ebe, ị ga-achọ ịgbanwe si ala unit mmanụ. Aga n'ihu ma na-eme nke a ugbu a ka ị na-anaghị echefu na-eme ya mgbe e mesịrị. Wepụ elu na nke ala igbapu kposara na igbapu si ochie mmanụ. The stof wee si m anya ihe dị ka eji moto mmanụ. Aga n'ihu ma na-eji dochie ala unit mmanụ na kwesịrị ekwesị outboard ala unit gia lube. Don si eji haịdrọlik ọmụmụ dị ka ọ na-ekwu na akụkụ nke ala unit. The spec a ala unit gia lube bụ Lower unit mmanụ: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis na pụrụ ịchọta dị nnọọ banyere n'ebe ọ bụla.
Upper igbapu ịghasa
N'iji 7 / 16 sụgharịa, wepụ oghere anọ nke ala. Kpoo ala ala na ala. Ogwe ndị agha na nnyefe ntụgharị ga-abịa na mpaghara ala. Jiri akwa akwa ma ọ bụ mpempe akwụkwọ ndị ọzọ ma kpochie akụkụ skeg dị ala n'ime ihe.
Wepụ Lowr Unit n'ise
Wepu mpịakọta mpịakọta ahụ n'elu nkedo. Ị ga - achọ nke a site na ụzọ ka ị nwere ike wepu ụlọ na - adịghị mma. Enweghi ike wepu ihe nfe site na ala di ala n'ihi na o nwere ike isiri gi ike iweghachite ya.
Wepụ Roll Pin
Wepu ihe nkedo anọ nke na-ejide ụlọ obibi dị egwu. Bulie ụlọ ndị na-adịghị mma ka ha ghara ịdọrọ. Ebube ochie kwesịrị ịdị n'ime ụlọ a. N'ọnọdụ m, a na-agbaji ihe dị egwu (ọ bụghị mma). Wepụ ihe dị mma, dị ọcha na kpochapụ ụlọ ndị na-adịghị mma. N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ka ochie ahụ na-eme ka ọ ghara ịmalite.
Wepụ Impeller Cover
Bad na New Impeller
Wepụ isi ihe na-apụtaghị ìhè site na draịva. Akụkụ a dị mfe ida na ike iji dochie anya ịkpachara anya.
Wepụ Impeller Key
Wepu ma hichaa efere na-ekpuchi. Buputa na ikuku n 'ikuku ka enweghi ihe ndi ozo nke nwere ike ijide n'osisi mmiri. Dochie efere efere.
Dochie Water efere
Mee ka oghere ọhụrụ ahụ banye n'ụlọ obibi dị egwu. Nke a nwere ike ịbụ ntakịrị ihe aghụghọ. Ikwesiri igbanwe ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agagharị na ntanetị ma na-ehichaa taabụ ahụ, ya mere ha na-abanye n'ime ụlọ ahụ. Gbanwee igodo na-apụta na ụlọ ma chekwaa ihu anọ ahụ nke na-ejide ụlọ na-adịghị mma. Ọ dị mkpa ka ị ghara ichezọ isi igodo ahụ. Na-enweghị ya, ihe na-adịghị mma agaghị agbanye ma kpoo mmiri. N'ebe a na-agbakwụnye ntụtụ mpịakọta n'elu nkuku ụgbọala.
Ebe Impeller n'ime Housing
Dochie Impeller Key na Housing
Ọ bụ ezie na ị nwere obere ala, hichaa ma kpochapụ ihe niile ị nwere ike ịgụnye mmiri nke na-ewe mmiri site na ụlọ na-adịghị mma ka isi n'isi. Tinye akwa silik nke dị na nkedo nke ala nke ala ala tupu etinye ya na midsection. Ị nwere ike ịkwaga ebe dị ala iji nweta ihe nhazi na ịgbanwee njikọ iji zụlite azụ site na midsection. Gaa na obere ala na mkpanaka anọ na 7 / 16.
Izukotakwa Lower na Midsection
Itinye Lower Unit
Dochie prop, shiee pin, cotter pin, na prop okpu.
Dochie prop na Shea pin.
Dochie Cotter pin na prop Cap
Jikọọ njikọ ngbanwe. Dichaa ma kpoo ebe ahụ dị ka i nwere ike. Dochie windo mmiri mmiri, okpu, na eriri na akwọ ụgbọala.
Itinye Mgbanwe Linkage Mkpụrụ
Wepu efere mmiri mpempe mmiri wee nyochaa n'azụ ya. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị n'ebe ahụ, hichaa ma kụọ ya. Tinye efere azụ na inlets na-eche ihu azụ.
Mgbe ị na-apụ isi, gbanwee ihu ala, nyochaa akara mgbaaka nke obere ala ma dochie ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dichaa ma kpochapụ ihe odide mmiri niile. Ugbu a, ị nwere ike ịtọghachi isi isi ahụ wee banye na nkedo isi isi asaa. Rịba ama, ike isi isi ike nwere ike isi ike dochie. Ihe m na-eji eme ihe bụ iji nweta silicone ma tinye ya n'isi. Tinye ihe nkedo n'elu ihe nkedo a ma kpo ya. Ugbu a, nkedo ahụ ga-anọgide na nkedo nkedo ka i wee nweta nzaghachi n'ime oghere dị n'ihu nke isi ike ahụ.
Dochie Power Head
Itinye trotul Linkage
Ugbu a gị ala unit na-serviced, na gị moto ga-agba ọsọ dị mma na ọhụrụ gị na impeller mmiri mgbapụta.
4 ọnwa 2 izu gara aga
4 ọnwa 3 izu gara aga